के गरे ज्ञवालीले ? के गर्नेछन् अब ?(वार्ता):lumbinireview
पांच बर्षभित्रै गुल्मी देशकै नमूना जिल्ला
उम्मेदवारःगुल्मी क्षेत्र नम्बर १
— आफ्ना प्रतिनिधि महत्वपूर्ण केन्द्रिय भुमिकाका हुंदा गुल्मेली मतदाताले गर्वको महसुस गर्नु भएको छ ।
—राष्ट्रिय र ठूला मुद्धाहरु सल्टिसकेकाछन् । अब जिल्लामा प्रशस्त समय दिन पाउंछु ।
—बामपन्थी लोकतन्त्रका च्याम्पियन हुन् । बिकासका अभियन्ता हुन् । अबश्य एकता हुनेछ ।
—जित्ने कुरामा शंका छैन् । कति मतान्तरले जित्ने भन्ने मात्र हो ।
—पांच बर्षभित्रै गुल्मी देशकै नमूना जिल्लामा रुपान्तरित हुंनेछ ।
कस्तो भैराछ चुनावी माहोल ?
निकै उत्साहपूर्ण तरिकाले चुनावी गतिबिधि अघि बढिरहेकाछन् । कसरी बढिभन्दा बढि जनतासंग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रमका स्वरुपहरु बनाईरहेकाछौं । अहिलेसम्म धेरैजसो स्थान र वडामा घरदैलो गरिसकेकाछौं । जनतालाई आफ्ना कुरा राख्ने र जनताका सुझावहरु लिने काम गरिरहेकाछौं ।
निर्वाचन जित्नुहुन्छ त ?
त्यसमा त कुनै शंका नै छैन् । कति मतान्तरले जित्ने भन्ने मात्र कुरा हो । जितपछि जनताका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराको प्रारुप पनि बनाईरहेकाछौं ।
तर तपाईलाई ‘जिल्लाको भन्दा पनि केन्द्रको माया गर्ने’ भन्ने पुरानै आरोप छ नि ।
यो मैले सुन्दै आएको आरोप हो । तर गुल्मेली जनताले बुझ्नुभएको छ भन्ने लाग्छ । मैले शान्ति प्रकृयाका लागि धेरै समय खर्च गरें । आफ्ना प्रतिनिधि शान्ति प्रकृया टुंग्याउने केन्द्रिय भुमिकाका हुंदा गुल्मेली मतदाताले गर्वको महसुस गर्नु भएको छ । ठूला—ठूला भ्रष्टाचारका काण्डको उत्खननमा मैले समय खर्चिएं । यसबाट देशलाई नै फाईदा भएको छ,आफ्ना प्रतिनिधिले यस्तो भुमिका खेल्दा गुल्मेली जनता सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामीकहां जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही समस्या छ । निश्चय नै जनता र जनप्रतिनिधिको भुमिका घनिष्ठ हुनुपर्छ ,शंका नै छैन् । जनप्रतिनिधिहरुले समय दिनुपर्छ । तर संबिधान बनाउन पठाएको त्यसमा कुनै भुमिका छैन्,कानुन बनाउन पठाएको कुनै भुमिका छैन्,बिकास निर्माणमा पनि भुमिका छैन् । खाली जनतासंगै छु भनेर फोटो छाप्नुको कुनै अर्थ छैन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा भुमिकासंगसंगै जनताको बिचमा रहनुपर्छ भन्ने सुझावलाई मैले ग्रहण गरेको छु । आगामी दिनमा जनताकासंग अझ बाक्लो समय दिने कुरामा म सजग नै छु ।
यो कुरा जनतालाई बुझाउन पनि नसक्नु भएको हो ?
हामी कहां यौटा परम्परा रहंदै आयो—पञ्चायतकालमा पनि पञ्चहरुसंग कुनै एजेण्डा हुंदैनथ्यो,जनतासंग ब्यक्तिगत रुपमा आश्वासन बांड्थे । बहुदलमा पनि त्यस्तै भयो । गणतन्त्रमा पनि त्यो ढांचामा परिवर्तन भएन् । राष्ट्रिय मुद्धालाई कम आंक्ने परम्परा जारी रह्यो । मैले राष्ट्रिय मुद्धामा समय दिनुपरेका कारण जिल्लामा कम समय दिन सकेको हुनसक्छ । अब राष्ट्रिय र ठूला मुद्धाहरु सल्टिसकेकाछन् । अब जिल्लामा प्रशस्त समय दिन पाउंछु ।
गुल्मीमा अचम्मको मनोबिज्ञान पाईन्छ । अझ चुनावको बेला । जसले पनि सबै काम मैले मात्र गरेको हुं भन्ने । ठ्याक्क भन्नोस त तपाईले अबसर पाउंदा गुल्मीका लागि ठूला के काम गर्नु भो ?
मलाई सस्तो प्रचारबाजीमा बिश्वास छैन् । म काममा बिश्वास गर्ने मान्छे हुं । पहिलो प्रतिनिधि सभामा तीन बर्ष काम गर्ने मौका पाएं—२०५६ मा । संसद पुनस्थापनापछि दुई बर्ष र पहिलो संबिधान सभामा चार बर्ष गरी मैले नौ बर्ष जनप्रतिनिधिका रुपमा काम गरें । मलाई गर्व छ—केही महत्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्वका, रणनीतिक महत्वका,बिकास निर्माणका कामहरु अघि बढायौं । गुल्मीका प्रत्येक नागरिकलाई थाहा छ—जनतको श्रमदानबाट बनेको तानसेन—रिडी—तम्घास मोटर बाटो २०३७ सालमा तम्घाससम्म ट्रयाक खुलेपनि २० बर्षसम्म पूरै उपेक्षाको शिकार भयो । पहिलो कार्यकालको पहिलो प्राथमिता अनुसार त्यो बाटो पिच गर्यौं । आज त्यो बाटोबाट दैनिक हजारौं यात्रुहरु ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ । गुल्मीको पहिचान हुंने रुरु—रेसुंगा हो । जसको निम्ति म मन्त्री हुंदा राष्ट्रिय स्तरको समिति बनाएर बर्षको करोडौ रुपैया लगानी गरेकाछौं । जसका कारण गुल्मी आज राष्ट्रिय पर्यटनको यौटा मानचित्रभित्र छ ,पर्यटकिय गन्तब्य बन्न पुगेको छ । गुल्मीलाई भबिष्यमा राष्ट्रिय बिकासको मूल प्रबाहमा ल्याउने रणनीतिक महत्वको सडक— कालिगण्डकी कोरिडोर म आफैले २०५७ सालमा शिलन्यास गरेकोथिएं । २०६४ पछि त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा स्थापित गर्यौं । बिचमा त्यसको ट्रयाक गुल्मीलाई छोडेर बनाउने कोशिस भएकोथियो,त्यसलाई गुल्मीबाट नै जाने बनायौं । आज नेपाली सेनाको निर्माण कार्यदलले काम गरेर रिडीदेखि मुस्तांकको कोरालासम्म गाडी गुड्ने भएको छ । मैले गरेकामध्ये यो यौटा महत्वपूण काम ठानेकोछु । रुद्रबिनी—वामी जाने सडक लामो समयसम्म अलपत्र थियो । म आफैले पहल गरेर बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुंदा ४८ करोड बिनियोज भयो । आज त्यो बाटो पिच हुंदैछ । रेसुंगामा एयरपोर्ट बनाईरहेकाछौं । यो बर्षको अन्त्यसम्म परिक्षण उडान गर्ने तयारी गरिरहेकाछौं । गुल्मीमा राष्ट्रिय स्तरको कफी अनुसन्धान केन्द्र छ । जसले देशैभरीका कृषकहरु अध्ययन अनुसन्धान गर्न आउंछन् । गुल्मीको साबिकका १ र २ नम्बर क्षेत्रका प्रत्येक घरमा बिजुली पुगेको छ । त्यसको अगुवाई सामुदायिक बिद्युतीकरणको यौटा अभियन्ताका रुपमा मैले गरें । थुप्रै स्कूल, क्याम्पस,अस्पतालहरु खोलेकाछौं ।
सबै तपाईले गर्नु भो ?
कामको मुल्यांकनबारे गुल्मेली जनतालाई सोधे पुग्छ । केही साथीहरु छन्,जसको कार्यकालमा कुनै यौटा राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम भएनन् । नियमित रुपमा आउने साढे तीन करोड सांसद बिकास कोषको बजेट,नियमित रुपमा आउने जनता आवास कार्यक्रमको बजेट र केही पूर्बाधारका नियमित कार्यक्रमबाहेक यौटा पनि नयां र राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु आएनन् । त्यस्ता साथीहरु त्यसै त्यसै फेसबुकमा रमाईरहेकाछन् । यौटा नेपाली गीत छ नि आफ्नो रुप हेरि हेरि आफै पर्छु दंग भने जस्तै । अझ कतिपय साथीलाई म बेलायतको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मान्छे कहां झुक्किएर नेपालमा जन्मिएछु भन्ने भ्रम छ ।
चुनाव जित्नु भो भने के गर्नु हुन्छ नयां ?
म जित्छु । पहिलो कुरा यसपटक दुई वटा मुख्य आधार बनाएर निर्वाचनमा बाम गठबन्धन भएको छ । देशको सबभन्दा चुनौती राजनैतिक अस्थिरता हो । बहुदलपछिका २७ बर्षमध्ये ज्ञानेन्द्र कालका ४ बर्ष छाडेर २३—२४ बर्षमा २३—२४ सरकार फेरिए । बरु मैले लगाएको जुत्ता दुई बर्ष टिक्छ,सरकार बर्ष दिनपनि टिक्दैन् । त्यस्तो अस्थिरता अन्त्य गर्दै राजनैतिक स्थायित्वको संकल्प गरेकाछौं । अब मुलुकलाई छोटो समयमै आर्थिक बिकास र समृद्धिमा लैजाने दायित्व छ । पांच बर्षभित्र देशलाई अति अल्पबिकसितको सूचिबाट माथि लैजाने र दश बर्षभित्र मध्ययम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने सं
कल्प लिएकाछौं । बाम गठबन्धनको घोषणा पत्रमा त्यो स्पष्ट लेखिएको छ । म आफै पनि त्यो कार्यदलमा थिएं । बडो सोची बिचारी लेखेका हौं । ०७४ मंसिर पछि देश अर्को युगमा प्रबेश गर्नेछ ।
हो जहांसम्म जिल्लाको सन्दर्भ छ —पांच वटा कुरालाई केन्द्रबिन्दूमा राखेका बिकास गर्ने छौं । सडक यातायातका लागि प्रयाप्त पुर्बाधार बनाईनेछ,भएका सडकलाई स्तर उन्नति गरिनेछ । पहिलो—राष्ट्रिय स्तरका सडक सञ्जालहरु—कालिगण्डकी करिडोर,रिडी—खरज्यांग—बलकोट हुंदै सुर्खेत,पूर्तिघाट—शान्तिपुर हुंदै मध्यपहाड जोड्ने सडक लगायतलाई स्तर उन्नती गरिनेछ । सधै सबैको दुःख बनेको सिद्धबाबाको बिकल्प खोजिनेछ । दोश्रो—कृषिलाई ब्यबसायिक र आधुनिकीकरण,ठूला सिंचाई आयोजनाका लागि ठोस योजना ल्याईनेछ । तेश्रो—गुल्मीलाई पर्यटन कन्द्रे बनाईनेछ । चौथो—प्रत्येक घरलाई शेयरधनी हुने गरी ठूलो आयोजना सञ्चालन गरिने छ । जसले गुल्मेली जनताको जीवनस्तर उकास्ने छ । पाचौं—गुल्मीका हरेक घर जस्ता पाताले छाईनेछन्,हरेक घरमा स्वच्छ खानेपानी हुनेछ । २४ घण्टा नै बिजुली हुनेछ । प्रत्येक गाउंपालिकामा सुबिधा सम्पन्न अस्पताल हुनेछ,हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी हुनेछ । हरेक माबिमा स्कूल बसको ब्यबस्था गरिनेछ । यी र यस्तै थप योजनाहरु पनि बनाईनेछ । पांच बर्षको कार्यकाल सकिंदा नसकिंदै गुल्मी देशकै नमूना जिल्लामा रुपान्तरित हुंनेछ ।
तपाई त सुडान घोटाला काण्ड जस्ता ठूला भ्रष्टाचार छानबिनमा सहभागि नेता । जिल्लालाई भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनयुक्त बनाउने कुनै चुनावी एजेण्डालाई स्थान दिनु भएन त ।
अबश्य छ । यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर यो जनप्रतिनिधि आफैबाट शुरु गर्नुपर्छ । राज्यबाट पैसा नलिने घोषणा गर्ने तर जीवन शैली नवधनाड्यको जस्तो हुनु भएन । मेरो जीवन खुल्ला कितावका पाना जस्तै छ ।
भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनयुक्त जिल्ला बनाउन दुई कुरा महत्वपूर्ण छन् । सार्वजनिक निर्माण कार्यलार्ई गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउन जोड दिईने छ । दोश्रो—हरेक कार्यलयहरुबाट सहज सेवा पाउने ब्यबस्था गरिनेछ । घुस,ढिलासुस्ती,अनियमितता हुन दिईनेछैन् ।
शान्ति प्रकृया र बाम गठबन्धनमा धेरै भुमिका खेल्नु भाथ्यो । भन्नुस त यस्तो गठबन्धन किन ? अनि कति टिक्ला ?
राजनैतिक अस्थिरताका कारण देशले धेरै दुःख पायो । बर्षै पिच्छे सरकार फेरिंदा केही ब्यक्तिका फोटा झुण्याउने मात्र काम भयो । राज्य प्रणाली करिब करिब ‘कोल्याप्स’ भयो । राष्ट्रियतामाथि ठूलो आघात भयो । जनतामा बितृष्णा पैदा भयो । यी सबैबाट देशलाई पार लगाउदै राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि बामगठबन्धन जरुरी देखियो ।
यो देशमा बामपन्थीहरुको ठूलो भुमिका र योगदान छ । यी लोकतन्त्रका च्याम्पियन हुन् । बिकासका अभियन्ता हुन् । राष्ट्रियताका पहरेदार हुन् । त्यही भएर जनतामा लोकप्रीय भएका हुन् । तर बिभिन्न कारणले बिभाजित अरुले लाभ लिए । जनमत बामपन्थीको छ तर अल्पमतले बहुमतमाथि शासन चलाईरह्यो । त्यस्तो अबस्थाको अन्त्य गर्नका लागि बाम एक हुने संकल्प गरियो ।
अब चुनावी तालमेल मात्रै हैन् दीर्घकालमा एकिकृत यौटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने लक्ष्य छ । अबश्यक एक हुनेछन् । यस्तो गठबन्धन र एकता दीगो नहुंने प्रश्नै छैन् । केही चुनौती छन् । दुई पार्टीभित्र बिगतका भावनात्मक दूरी मिलाउन जरुरी छ । बिपक्षीले एकता भत्काउने कोशिस पनि गर्नेछन् । तर दृढ संकल्प गरेकाछौं—यो संकल्प पूरा हुनेछ । यसबाट प्रतिपक्ष तर्सिनु पर्दैन् । बरु उहांहरुले पनि यौटा बलियो धार बनाए हुन्छ ।